Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Vaovao momba ny fifidianana UNWTO navoakan'ny WTN
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Lisitry ny Delegasiona farany manapa-kevitra momba ny hoavin'ny UNWTO, World Tourism Organization
Ireo solontena avy amin’ny firenena 113 no andrasana hifidy amin’ny fivoriamben’ny UNWTO hatao any Madrid ny 30 Novambra ka hatramin’ny 3 Desambra. eTurboNews manana vinavina navoakan'ny World Tourism Network izao. Ny fanisana ny isan'ny firenena hofidiana ary firy ny manohitra ny fanamafisana indray ny Sekretera Jeneraly no resahina ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny Fivoriamben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO) dia miomana hanomboka any Madrid ny 30 Novambra - 3 Desambra.
Ny fandaharam-potoana andrasan'ny maro indrindra dia ny fifidianana miafina amin'ny fihainoana ny fanamafisana an'i Zurab Pololikashvili mandritra ny fe-potoana iray hafa.
Samy manentana ireo solontena hifidy ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha sy ireo mpitarika am-polony amin'izao fotoana izao sy taloha ao amin'ny Fizahantany Manerantany. NO tamin'ny fihainoana ny fanamafisana miafina.
Izany dia nazava tamin'ny andian-taratasy misokatra nataon'ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha tao amin'ny UNWTO, ny fampielezan-kevitra momba ny fahamendrehana amin'ny fifidianana nataon'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, ary avy amin'i Costa Rica mangataka a vato miafina ho an'ity fihainoana fanamafisana ity.
Efa eo am-pelatanan’ireo solontena manatrika ny fivoriambe amin’ny herinandro ho avy io fanapahan-kevitra io.
Araka ny vinavinan'ny World Tourism Network vao haingana, ny vinavinan'ny fanamafisana ny fifidianana Sekretera Jeneraly dia toy izao manaraka izao hatramin'ny 23 Novambra.
Firenena 7 no andrasana hanamafy an'i Zurab amin'ny fifidianana miafina
Firenena 43 no heverina fa TSY hanamafy an'i Zurab amin'ny fifidianana miafina
Firenena 63 no mbola tsy tapa-kevitra ny amin'ny fomba hifidy amin'ny fifidianana miafina
Ilaina ny 2/3 amin'ny vato hanamafisana.
Raha tsy misy ny fanamafisana dia ho avy ny fifidianana vaovao ahitana kandidà vaovao. Nohazavain'ny eTurboNews ato amin'ity lahatsoratra ity:
Solontena voasoratra anarana amin'izao fotoana izao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy
Raha mpikambana ao amin'ny World Tourism Network ianao, tsindrio eto a lisitry ny solontena UNWTO amin'ny fivoriambe ho avy any Madrid 2021;